Mma | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Kedu esi eme ka a na-eme ka ịkpụ aka na-aga n'ụlọ. Atụmatụ
A na-ahụ ihe mkpuchi maka ntu aka dị ka ọ maara. Ya mere, ndị fashionistas nwere ọchịchọ zuru ezu ịchọta ụdị ahụ. Ọkpụkpụ na-ejide onwe ya bụ echiche nke apụtaghị ogologo oge gara aga. Nke nta nke nta, ndị dị otú ahụ ntu ntule merie ...
Ihe ngosi “ihe nzuzo Victoria” (Nzuzo Victoria): nyocha, ọnụahịa
Ihe ama ama ama ama ama ama ama America nke Victoria Victoria n’egosiwo oru ya nile na okike nke ihe mara mma ma na-esi isi. N'ụzọ bụ isi, n'okpuru ika a, a na-emepụta mkpokọta ọmarịcha okomoko, yana ...
Ngwọta ya na oghere - esi mee?
Aka nwanyi kwesiri ile anya ma mara mma. Ọkpụkpụ aka bụ njedebe ikpeazụ nke ịmepụta ịke. Ọ nwere ike idebe otu ihe oyiyi ma ọ bụ ọzọ ma ọ bụ bụrụ ihe na-ekwesịghị ekwesị. N'isiokwu a ...
Tattoo "ụgbọ mmiri": gịnị bụ ihe nzuzo nzuzo nke onyo a?
Ị nwere ike igosipụta mmadụ gị n'otu ụzọ dị iche iche: mmadụ na-ahọrọ iji aka ya rụọ ya, na-ekepụta ihe ndị mbụ na nke a na-ekewaghị ekewa, mmadụ na-ahọrọ ịzụ ahịa na enyemaka nke uwe na-egosipụta ụdị ya, onye na-ahọrọ ebe ...
Ejiri anụcha mint (foto)
A matala ụcha mint dị ka ọdịdị nke oge ọzọ. Ndị na-eme ihe nkiri gburugburu ụwa na-arụsi ọrụ ike na-eji nwayọọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nchịkọta ọhụrụ ha. Ọ naghị enweta ihe na-acha odo odo na mbọ nke fashionistas, n'ihi na mint nsịcha ...
Alien - senti sitere na Thierry Mugler. Nchịkwa osisi zuru oke, isi na nyocha ndị ahịa
Taa, anyị ga-anwale ụdị ngwaahịa atọ site n'ụlọ Thierry Mugler kpọrọ Alien: ísì ụtọ (ma ọ bụ kama nke a, eau de parfum) "Allen" na ụmụnne ya ndị nwoke abụọ - "Banyere Extraordiner" na "Sanessens". Enweghị ike ikwu na ...
Tom Ford (ihe nsure ọkụ maka ndị ikom na ndị inyom): nyochaa banyere ndị na-azụ ahịa na ndị ọkachamara
Tom Ford bụ onye a ma ama, nke nwere nzube na onye mbụ bụ onye natara nrite na ntanetị, ihe owuwu na ihe ndị na-esi ísì ụtọ. Nwoke a n'onwe ya kere alaeze ya ma nweta utu aha "Eze nwụrụ anwụ." Otú ọ dị, ọ bụghị naanị ...
LPG-ngwaọrụ (ịhịa aka n'ahụ): nyocha
Usoro mbu maka mweghachi nke akpụkpọ ahụ ma ọ bụ LPG-ịhịa aka n'ahụ bụ nke mbụ eji mee ihe banyere 30-afọ gara aga. Igwe nke LPG mepụtara site na onye injinia French mgbe o nwere ihe mberede, o ghaghi iwere uzo ...
Kedu otu esi ahọrọ anya maka ndọtị?
Ogologo anya, nku anya na-eme ka anya nwanyi na-ahụkwu okwu na n'otu oge dị omimi. Ndị na-enweghị ezigbo ohere iji nweta ndị dị otú ahụ, nwere ike iji ike ọrụ. Ọ na-enye ọtụtụ ihe ntanetị ...
Kompas - egbugbu maka obi ụtọ
Ngwurugwu dị oké mkpa n'okporo ụzọ. Ikekwe ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị njem nlegharị anya ji eji ejiji mara mma na-eji ahụ ya mma. Compass - egbu, nke na-eme ka ọ bụghị naanị romantically uche wanderers, ma ...
Agba ntutu "Rowan": palette nke agba, nyocha
Ụcha agba "Rowan", nke na-enye ụmụ nwanyị ihe dị ka okpukpu iri atọ dị iche iche, na-ewu ewu. Enwere ọtụtụ ihe kpatara nke a. Ndị inyom na-eji "Rowan" rịba ama na ọ dị ọnụ ala, enweghị isi, ọ bụghị ...
Ntọala Max Nkọwa arụmọrụ na-adịgide adịgide. Ahụ gị zuru okè
O yighị ka e nwere ọ dịkarịa ala otu nwa agbọghọ nọ n'ụwa, na-enwe afọ ojuju n'ọdịdị ya. Jide n'aka na ihe ga-ezighi ezi. Ma ọtụtụ mgbe, ọ bụghị ụmụ agbọghọ na-enweghi afọ ojuju na akpụkpọ ahụ ha, nke a na-adịghị eju anya n'okpuru ọnọdụ gburugburu ebe obibi ugbu a. ...
Pilki ntu (SPb): ozi, adreesị, nyocha
N'oge na-adịbeghị anya, a na-eme ihe iji mee ka ọkpụkpụ na-eme ihe ọ bụla nanị n'elu ihe oriri dị elu ma na ọnụ ahịa dị elu. Oge na-agbanwe agbanwe, ahịa maka ọrụ na-eto eto. Otú ọ dị, ọnụ ahịa nke ọnụahịa na mma dị na ụlọ ntu, ọbụna na ...
Faberlic, ntọala nnọchite mmadụ abụọ: nyocha. Ihe nzuzo etemeete
Ngwá ọrụ ngwá ọrụ bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi nke akpa akwa nwanyi, na-enweghị nke a ga-eji ememe: ememe ma ọ bụ mgbede. Nke a bụ onye concealer nke nwere ike zoo ezughị okè akpụkpọ anụ, ike gwụrụ ...
Kedu ihe na-esi ísì ụtọ? Kwuo ihe ọ dị?
Kedu ụdị ihe eji esi ísì ụtọ nke a bụ - vetiver? Kedu ka isi ahụ dị? Vetiver bụ ahịhịa sitere na ezinụlọ nke ahịhịa ọka, mkpụrụ osisi na-eto ngwa ngwa nke nwere ike ịdịru afọ 50 ma ọ bụ karịa.
Turmeric face mask: ụzọ nri, ntụziaka, nyocha
Anyị na-ahụkarị ngwa nri dị ka ihe oriri. Ma n'ọtụtụ mba dị n'ebe ọwụwa anyanwụ, a na-emeso ha n'ụzọ dịgasị iche. Ndị bi n'ebe ahụ na-efe ha ma chee na ha bụ "onyinye nke chi." ...
Kedu otu esi eto eto ka o wee ghara igbochi ya? Na-elekọta bangs na styling
Ihe ịrụ ụka adịghị ya, ụlọ ga-abụ ọkwa dị mma nke ụdị edozi. Mgbe ụfọdụ, ịchọrọ ịgbanwere ọdịdị ahụ. Ma otu esi eto eto nke mere na ọ dịghị egbochi ya, ọ dịghị akpata nsogbu na, na njedebe, anaghị emebi emebi kwa ụbọchị ...
Ejiji edozi ejiji maka ndi egwuregwu football
David Beckham, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi na ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ na-echetara anyị ọ bụghị nanị site na egwuregwu mbụ ha, kamakwa site na ntutu isi. Na mgbakwunye na nkà na ụzụ, a na-enye ha uto dị ụtọ. Banyere ...
Ogologo oge ole ka gel na-agbanye mbọ? Ọnụahịa nke ịkpụcha mbọ aka, nyocha
Ọchịchọ mara mma ma na-adịte aka bụ nrọ nke ọtụtụ ụmụ agbọghọ. O wee bụrụ eziokwu na ọbịbịa nke gel polishes, nke na-eguzogide ọgwụ, dị ka ntu ntu, na mfe iji, dị ka varnish. Nke a bụ nke zuru okè ...
Kedu ihe na esi esi kpuchie ọnya ahụ n'okpuru anya?
Hematomas (bruises) bụ otu n'ime nsogbu ndị siri ike, karịsịa na ikpe ebe ha na-enweghị ike zonahụ ọha mmadụ. Usoro nke hematoma ọdịdị dị mfe: mgbe mmebi nke dị nro, ihe dị nro ma ọ bụ ...